KULOKOZA inhlansi yethemba ngecala likaSenzo Meyiwa njengoba abaphenyi be-Afri Forum bethembisa ukudalula okusha maduze Isithombe: Barry Aldworth
NQOBILE MASIMULA | March 30, 2020
SELUSESIGABENI esibucayiuphenyo lwecala lokubulawa kowayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana, uSenzo Meyiwa. Inhlangano esiza umphakathi i-Afriforum ithi ayifuni ukukhuluma ngecala likaMeyiwa njengoba izinga lophenyo selusesigabeni esibucayi.
Lokhu kuvezwe wu-Advocate Tiger Mamabolo osethimbeni labaphenyi ngaphansi kuka-Advocate Gerrie Nel okunguyena ohola lolu phenyo.
U-Adv Mamabolo uveze ukuthi ngendlela uphenyo olusesigabeni esibucayi ngayo akusavumelekile ukuthi bakhulume ngalo.
“Ikhona inqubekela phambili mayelana nophenyo kodwa akusavumelekile ukuthi sikhulume ngalo esidlangalaleni. Maduze umphakathi uzokwaziswa ngokutholwe abaphenyi,” kuchaza uMamabolo.
Uphenyo ngecala lokubulawa kukaMeyiwa lathathwa yi-AfriForum ezinyangeni ezinhlanu ezedlule, emuva kokuthi kuze kwaphela iminyaka emihlanu umbutho wamaphoyisa wakuleli, ungakaze ubophe muntu ngobulawa kwakhe.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli uMnuz Bheki Cele, watshela iNingizimu Afrika kwi-eNCA ngo-2019 ukuthi, ngeke ashaye uDisemba 25 kungaboshwanga muntu futhi unesiqiniseko salokho. Ngesikhathi esho lokhu uCele kwakuzoba ngamaholidi ePhasika, nalapho athi sekuseduze ukuthi babophe.
Ethintwa okhulumela umndeni wakaMeyiwa, uSiyabonga Miya uthe yize i-Afri-Forum ingaxhumani naye ngqo kodwa ugcine kungekho okusha okusavelile mayelana necala.
“Umuntu abaxhumana naye nguSfiso kodwa sigcina ukukhuluma, wangitshela ukuthi bazosazisa maduze ngokuvelayo ophenyweni lwabo. Basitshele ukuthi isimo esigubuzele iNingizimu Afrika sesizokwenza luhambe kancane uphenyo njengoba kumele kume yonke into,” kusho uMiya.
Uthe kusobala ukuthi okuningi kuzoqhubeka uma sekudlule isimo sokuvalwa thaqa kwezinto kuleli. UMeyiwa wabulawa ngo-Okthoba 26 ngo-2014 eseVolsoroos, kubo kalowo owayeyintombi yakhe nobuye abe ngumculi wakuleli, uKelly Khumalo.
Washonela esibhedlela, ngenxa yamanxeba okudutshulwa.
Kwake kwaboshwa umlisa ongumakhelwane kaKelly, uZamokuhle Mbatha kodwa wabuye wadedelwa kwathiwa abukho ubufakazi obumumatanisa necala.
UMbatha wafaka isicelo sokunxephezelelwa nguhulumeni ngokumbophela into engekho kanti ufuna * - R17.7million njengesinxephezelo.